Inter oo fasaxeysa labo ka mid ah xiddigaheeda si ay u dhameystirto heshiiska N’Golo Kanté – Gool FM
Inter oo fasaxeysa labo ka mid ah xiddigaheeda si ay u dhameystirto heshiiska N’Golo Kanté
(Milano) 27 Sebt 2020. Inter Milan ayaa ku tijaabinaysa kooxda Chelsea in ka badan hal heshiis isdhaafsi ah, si ay kaga hesho adeega ciyaaryahanka khadka dhexe reer France ee N’Golo Kanté.
Sida laga soo xigtay shabakada “Calciomercato” ee dalka Talyaaniga, kooxda Inter Milan ayaa u soo bandhigtay Chelsea inay ka qeyb geliso xiddigaha Christian Eriksen iyo Marcelo Brozovic heshiiska N’Golo Kanté uu ugu wareegayo garoonka San Siro.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Chelsea ay iska diiday dalabka kaga yimid kooxda Inter Milan, waxayna shuruud kaga dhigtay inay hesho lacag, si ay u ogolaato bixitaanka Kanté.
Christian Eriksen ma haysto kalsoonida macalinka Inter Milan ee Antonio Conte, halka la fahansan yahay in Marcelo Brozovic uu waayi doono booskiisa kooxda kaddib marka uu N’Golo Kanté garoonka San Siro.
Warar hore ayaa sheegayay in Chelsea ay ku qiimeysay heshiiska N’Golo Kanté addun dhan 50 million euros, halka Inter ay sugeyso inay soo uruuriso lacagta, kaddib marka ay ka iibiso daafaceeda Milan Škriniar naadiga Tottenham Hotspur.
“Waxaan ku soconaa wadada saxda ah si aan u difaacano Premier League” Xiddig ka tirsan Liverpool